Uloliwe ohamba rhoqo oomatshini bokuqinisa izixhobo zomatshini
Ikhaya / izicelo / Ukukhutshwa ngokukhawuleza / Umgaqo kaloliwe oomatshini abenza nzima benzima
iindidi: Ukukhutshwa ngokukhawuleza, Umshini okhuselekileyo wokukhupha tags: ukwenza lukhuni, Ukuqiniswa kwesantya esiphezulu, inkqubo yokuqina rhoqo, isantya esiphezulu se-induction hardening, izixhobo zokwenza izinto ezilukhuni, umatshini wokuqinisa induction, Inkqubo yokwenza lukhuni, yoqheliso lukaloliwe olukhuni, Inkqubo yokwenza lukhuni, Ukucinywa kokucinywa, Umatshini wokucima uqeqesho, Inkqubo yokucima induction, ukuqina kobuso bendawo, ukuqina koololiwe
Ukukhupha nzima isetyenziselwa ngokukodwa ukuqina / ukucima iindawo ezinamacala kunye nemingxunya kunye neendawo ezimile kakuhle apho kuphela indawo ethile efuna ukufudunyezwa.
Ngokukhetha ukusebenza kwesantya se inkqubo yokufudumala, kuchazwa ubunzulu bokungena.
Ukongeza, kunokugqitywa ekubeni indawo leyo iya kwenziwa lukhuni emoyeni, ngamanzi okanye nge-emulsion ekhethekileyo yokuqina. Kuxhomekeka kwindawo yokupholisa, kufikelelwe kumaqondo ahlukeneyo obulukhuni.
Ukukhupha nzima inokufezekiswa njengesikhokelo okanye isisombululo esizenzekelayo. Kukho ukubanakho kokuqina kwinkqubo eqhubekayo.
Kukulungele ukuqina kunye nokufudumeza izinto ezahlukeneyo zomsebenzi, ezinje ngokuqinisa ukuqina kwemingxunya, iigiya, iileyili zesikhokelo, iidiski, izikhonkwane kunye nezinye izinto;
Inemisebenzi yokuqina okuqhubekayo, ukuqina ngaxeshanye, ukwahlula okuqhubekayo okuqinileyo, kunye nokuqina kwangexeshana;
Sebenzisa inkqubo yolawulo lwamanani okanye i-PLC kunye nenkqubo yokuguqula isantya senkqubo yokuqonda ukubekwa kwendawo yokusebenza kunye nokuskena, kwaye uqhagamshele i-PLC kunye nokufakelwa kwamandla okufudumeza amandla ukuvelisa imveliso ezenzekelayo.
Eme nkqo (ukuqina kwamalungu eshafti) + ethe tyaba (ukuqina kwamalungu eringi yegiya)
Ukuqina yenye ye Ukushisa kwe-HLQ ezona ndawo ziphambili zesicelo samandla. Amakhulu ezisombululo zethu ezomeleleyo ziyasebenza kwihlabathi liphela-uninzi lwazo lushishino lweemoto.
Esona sibonelelo siphambili sokwenza ubushushu bokungeniswa kobukrakra kukuba kuthatha imizuzwana embalwa. Kwisithando somlilo, inkqubo efanayo inokuthatha iiyure okanye iintsuku. Inokwenzeka njani loo nto?
Impendulo kukuba ukufakwa ngaphakathi kuyenzeka ekuveliseni ubushushu ngokukhawuleza. Oku, kwelinye icala, kuthetha ukuba ungadibanisa ukuqina kwinkqubo yemveliso. Ukuqina eziko, kwelinye icala, kukuchitha ixesha elininzi (ukulahleka kobushushu okukhulu) kwaye kufuna ukuhambisa izinto nokuba kukwiziko lakho lomlilo okanye kwikontraki esezantsi.
Ukudityaniswa komgca wokwenza lukhuni kunciphisa amaxesha akho akhokelayo kakhulu.
Ufumana ulawulo olupheleleyo kumgangatho, amaxesha okuhambisa kunye neendleko. Akukho sidingo sokuhambisa iikhilos zeekhomponenti ukuya ngaphambili nangaphambili, ezonga amandla kunye nokusingqongileyo, okokugqibela kodwa ulinciphisile inani lolawulo ukuya kubuncinci.
Iinkqubo ze-HLQ zokuFudumeza iiNkqubo zoMbane zokuFudumeza zineminyaka emininzi yamava ekuqiniseni okunyanzelekileyo kunye nokuvutha kwezinto ezahlukeneyo zomsebenzi. Kwintliziyo yenkqubo nganye yokuQinisa yi-HLQ yokuThintela ukuFudumeza iiNkqubo zoMbane oMandla oShushu, eyona nto iphambili kushintsho kuguquguquko kumzi mveliso. Aba baguquli baziwayo banceda ekuqinisekiseni ezona ziphumo zinzima zokuqina-imihla ngemihla, unyaka nonyaka
The umatshini wokuqinisa induction kubandakanya ukujonga nkqo nkqo, Horizontal (iziko) ukuskena kunye noomatshini abenziwe ngokwezifiso- kunye ne-serial kunye / okanye ngokulinganayo okubuyekeze imithombo yamandla okungeniswa enoluhlu olubanzi lwamandla okuphuma kunye nezixhobo.
Olu luhlu lwesixhobo somatshini wokwenza lukhuni sisebenzisa itekhnoloji yolawulo lwamanani, inemisebenzi eqhubekayo, efanayo, eqhubekayo kunye necandelo-yokucima imisebenzi, isetyenziselwa ukucima i-shafts, iidiski, izikhonkwane kunye neegiya, kwaye ibonakaliswe kukucima okuphezulu. Isixhobo somatshini esomeleleyo esisetyenziswa ngokudibanisa nobuninzi obuphakathi, isuperaudio frequency, frequency ephezulu kunye ne-ultrahigh frequency induction heat machine.
Ukucima i-CNC / isixhobo sokuqinisa isixhobo somatshini:
Inkqubo ye-CNC: Inkqubo ye-CNC yokucima umatshini ophakamileyo kunye nokugcina iinkqubo ezahlukeneyo zokucima iinkqubo ngokweemfuno ezahlukeneyo zomsebenzi.
I-HMI: uhlobo lwenkqubo kunye nemiboniso yomatshini womntu kwisiNgesi nakwisiTshayina.
Uhlengahlengiso lolawulo: inokulawula amandla okufudumeza ukuqala, ukumisa, ukutshisa kunye nexesha lokupholisa, isantya sokujikeleza kunye nesantya sokuhamba.
I-Lathe: yamkele isakhiwo esine-welding ngemisebenzi elungileyo yokubonisa umhlwa.
Iindawo uhlengahlengiso Top: amkele uhlengahlengiso yombane, ukuze uqonde nokubotshwa isiqwenga umsebenzi ezahlukeneyo ubude.
Inkqubo yetafile yomsebenzi: sebenzisa ibhola kunye ne-servo motor ukuqhuba, ukukhanya kokuqhuba, ukuchaneka kwesikhokelo esiphezulu kunye nokuma ngokuchanekileyo.
Main shaft inkqubo ujikeleziso: amkele frequency eliguqukayo elawula ukuqonda iindawo ujikeleziso isantya oluqhubekayo hlengiswa.
Icandelo lolawulo lombane: isixhobo somatshini sinomsebenzi wokukhusela amandla, sinokhuseleko oluphezulu kunye nokuthembeka.
Isakhelo: senziwe ngamacwecwe esinyithi, kunye nefestile kunye neengcango ezityibilikayo, kuthintela ukuntywila kwamanzi, kulula ukulayisha iinxalenye kunye nokujonga inkqubo yokuqinisa
I-CNC nkqo yokuqinisa / ukucima isixhobo somatshini
Ngokwendlela eyahlukeneyo yomsebenzi, kukho uhlobo oluthe nkqo, uhlobo oluthe tyaba,uhlobo oluvaliweyo, uhlobo olwenziwe ngokwezifiso, njl.
1.Standard SK-500 / 1000/1200 / 1500 workpiece uhlobo ezihambayo Kuba shafts, akwazi, izikhonkwane kunye amagiya lukhuni
2.SK-2000 / 2500/3000/4000 Uhlobo oluhambayo lokutshintsha, olusetyenziselwa ukufudumeza ubude obungaphezulu kwe-shaft ye-1500mm
Uhlobo oluvaliweyo olu-3: olwenzelwe i-shaft enkulu, indawo yokusebenza ecocekileyo ngakumbi.
4.isixhobo esomeleleyo sokuqinisa umatshini
I-SK-500 / 1000/1200 / 1500/2000/2500/3000/4000 Isetyenziselwa ishafti egudileyo
imodeli I-SK-500 I-SK-1000 I-SK-1200 I-SK-1500
Ubude bokufudumeza obuphezulu （mm） 500 1000 1200 1500
Ubushushu obukhulu be-（mm） 500 500 600 600
Ubuninzi bokubamba ubude （mm） 600 1100 1300 1600
Ubunzima obukhulu bomsebenzi （Kg） 100 100 100 100
Isantya sokujikeleza somsebenzi （r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
isantya somsebenzi moving mm / min） 6-3000 6-3000 6-3000 6-3000
Indlela yokupholisa Ukupholisa iHydrojet Ukupholisa iHydrojet Ukupholisa iHydrojet Ukupholisa iHydrojet
igalelo ombane 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz
amandla Motor 1.1KW 1.1KW 1.2KW 1.5KW
Lobukhulu LxWxH (mm) I-1600 x800 x2000 I-1600 x800 x2400 I-1900 x900 x2900 I-1900 x900 x3200
ubunzima （Kg 800 900 1100 1200
imodeli I-SK-2000 I-SK-2500 I-SK-3000 I-SK-4000
Ubude bokufudumeza obuphezulu （mm） 2000 2500 3000 4000
Ubushushu obukhulu be-（mm） 600 600 600 600
Ubuninzi bokubamba ubude （mm） 2000 2500 3000 4000
Ubunzima obukhulu bomsebenzi （Kg） 800 1000 1200 1500
isantya sokujikelezisa umsebenzi （r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
amandla Motor 2KW 2.2KW 2.5KW 3KW
Lobukhulu LxWxH (mm) I-1900 x900 x2400 I-1900 x900 x2900 I-1900 x900 x3400 I-1900 x900 x4300
ubunzima （Kg 1200 1300 1400 1500
I-CNC yokuqinisa / ukucima isixhobo somatshini:
Inkqubo ye-1.CNC: Inkqubo yokuqinisa umatshini ohamba ngesantya esiphezulu inokuqokelela kwaye igcine iinkqubo ezahlukeneyo zokucima iinkqubo ngokweemfuno ezahlukeneyo zomsebenzi.
2.HMI: uhlobo lwenkqubo kunye nemiboniso yomatshini womntu kwisiNgesi nakwisiTshayina.
Ukulungiswa kolawulo lwe-3.Ukulawula amandla okufudumeza ukuqala, ukumisa, ukutshisa kunye nexesha lokupholisa, isantya sokujikeleza kunye nesantya sokuhamba.
4.Lathe: amkele welding isakhiwo ngemisebenzi elungileyo irusi-ubungqina.
Izahlulo 5.Top uhlengahlengiso: ukwamkela uhlengahlengiso yombane, ukuze uqonde nokubotshwa umsebenzi isiqwenga ubude ezahlukeneyo.
Inkqubo yetafile ye-6.Work: yamkela ibhola kunye ne-servo motor ukuqhuba, ukukhanya kokuqhuba, isikhokelo esiphezulu ngokuchanekileyo kunye nokuma ngokuchanekileyo.
Inkqubo yokujikeleza shaft 7.Main: ukwamkela frequency eguquguqukayo elawula ukuqaphela isantya sokujikeleza ngokuqhubekayo.
Inxalenye yolawulo lombane: isixhobo somatshini sinamandla okukhusela amandla okukhusela, sinokukhuseleka okuphezulu kunye nokuthembeka.
9.Isakhelo: esenziwe ngamacwecwe esinyithi, kunye nefestile kunye neengcango ezityibilikayo, kuthintela ukutshiza kwamanzi, kulula ukulayisha iinxalenye kunye nokujonga izixhobo zoqheliso lukhuni inkqubo.
I-Induction Surface Hardening Izixhobo zoMatshini
Ukukhupha Ukunyuka kwama-Gears Teeth